Dogwood बाट जाम - राम्रो र खराब
Dogwood एक रूख वा शरब छ, जसमा एक राम्रो र खट्टा स्वादको साथ जामुन बढ्दै जान्छ, एक सुखद, थोडा चक्र प्रभावको साथ, कोर्नल, जामुन, छाल, जरा र हड्डिहरु को घटकबाट लाभ उठाउन। यसको औषधि गुणहरू लोक चिकित्सामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र यो व्यापक रूपमा खाना पकाउने मा प्रयोग गरिन्छ। संकलन, मदिरा, जाम, मर्मेड्रेड , जाम, तरल, सॉस, सूप - र यो अहिले सम्म यो फलबाट पकाउन सकिन्छ को एक पूर्ण सूची छैन। यस लेखमा हामी तपाईंलाई भन्नेछौं कि dogwood जाम र यसको गुणका लागि उपयोगी छ।
Dogwood जाम को लाभ र नोकसान
खाना पकाउने सही गुणले गुण गुणहरूको सुरक्षालाई असर गर्छ: भिटामिन र खनिज। मानव स्वास्थ्यमा उनीहरूको लाभकारी प्रभाव छ। कच्ची रूप मा जामुन को शेल्फ जीवन केवल बाह्र दिन हो, यस समय को समाप्ति पछि वे खपत को लागि खतरनाक हो।
त्यसोभए, कोनेलबाट जामको प्रयोग के हो?
शरीरको क्रियाकलापका लागि भ्रामक र सफाई।
प्रतिरक्षा वृद्धि, गुणस्तर र गुणहरू toning।
नियमित प्रयोगले संक्रामक चिसोको प्रतिरोध गर्दछ।
हृदय रोगहरु, पेट र आंत रोगहरु मा एक सकारात्मक प्रभाव छ।
ब्रोंकी सफा गर्छ।
कर्नेल विभिन्न उपयोगी गुणहरु संग संतृप्त छ, जो जम्मा एक उच्च स्तर ascorbic एसिड, विटामिन ई, सी र पी, प्रोटामिन ए (कार्टोन) छ। संरचनामा समावेश खनिजहरू जस्ता लोहे, क्यालसियम, पोटेशियम, सल्फर र म्याग्नेशियम जस्ता छन्। किजिइल जीवविज्ञानी सक्रिय घटकहरुमा समृद्ध छ: ग्लूकोज, फ्रुकोज , आवश्यक तेल, टिनिन र कार्बनिक एसिड।
यसको प्रभावकारी चिकित्सीय सम्पत्तिका कारणले गर्दा काठको रोग, गैस्ट्रिक संक्रमण र छाला रोगको रोकथाममा dogwood जाम प्रभावकारी हुन्छ। यो एक एंटीबैक्टेरियल प्रभाव छ, रक्तचाप normalize, रगत को बर्तन को पर्खालहरु लाई बलियो बनाउँछ, रक्त मा हेमोग्लोबिन को स्तर बढ्छ। बुखारका साथ शरीरको तापमान तल ल्याउन मद्दत गर्दछ।
यी सुविधाहरू धेरै रोगहरूको उपचारमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि:
इन्फ्लूएंजा र एआरआई;
हड्डीको साथ कुकुरको जाम प्रयोग गर्नुहोस्
पिटको साथ कंकरबाट जामको प्रयोग पेक्टिनको उच्च सामग्री हो, जुन शरीरबाट हानिकारक विषाक्त पदार्थहरू हटाउन मद्दत गर्दछ। गर्मी उपचारको बेला उपयोगी गुणहरूको हानिको लागि हड्डियां कम प्रलोभनको लागी, यस्तो नम्रताले अधिकतम लाभ ल्याउनेछ। यो अपशिष्ट मार्ग सुधार गर्न पनि उपयोगी छ।
दुर्भाग्यवश, पकाउने बेला बेरीको मूल्यवान गुणहरू गुमाएका छन्। न्यूनतममा घाटा कम गर्न आदेश, यो गर्मी उपचारको समय कम गर्न आवश्यक छ।
तर भ्रूणको हानिकारक बारेमा बिर्सनु नगर्नुहोस्। यो गर्भवती र लापरवाही गर्ने महिलाहरु मा अपमानित हुन्छ, व्यक्तिगत असंतोष, आसानी देखि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, गैस्ट्रियिस, मधुमेह, रगत को क्लोटिंग, र अनिद्रा देखि पीडित मान्छे को रूप मा, उनि शरीर उत्तेजित, यो ऊर्जा का प्रभारी देने के रूप में। कुकुरवुड जामको अत्यधिक प्रयोग बहादुरी, दस्त, गुर्दे रोग र वजन बढ्छ। Dogwood को थप संग कुनै पनि खाना दबाइ को एक साथ प्रयोग संग संगत छैन।
जाम प्रयोग गर्दा लोकविधिहरु संग उपचार को रूप मा, यो जमैकन कोर्ने देखि बचने को लागि सिफारिश गरिन्छ, किनकि यो सम्भावित अत्यधिक विषैले र भोजन मा निस्पंदित छ। ऊ विशेष गरी तीव्र रोगहरु को चरम अवस्थामा मा नियुक्त गरिन्छ र केवल सटीक खुराकहरुमा एक चिकित्सक द्वारा सख्त अवलोकन को अंतर्गत।
पोटेशियम के हो?
सुकेको फल - राम्रो र खराब
क्यागा को लागि उपयोगी छ?
साम्राज्य राम्रो वा खराब छ?
वजन घटाने को लागि Persimmon को लाभ
मधुमेहको लागि भिटामिन
वनस्पतिक सूप वजन घटाने को लागि - व्यंजनहरु
वजन घटाने को लागि
Sauerkraut मा कति कैलोरीहरू छन्?
हेमेटोजेन - क्यालोरिक मान
क्रिलमा कति कैलोरीहरू छन्?
अंकहरू - शरीरका लागि राम्रो र खराब
पोलकक अण्डा - राम्रो र खराब
एल्कको मासु - राम्रो र खराब
आन्तरिक मा रूख
आन्तरिक मा फट्याङ्ग
छुट्टी को लागि सरल सलाद
कसरी ज्वरो संग हरियो बियर पकाउने?
समर नाखून डिजाइन 2013
बाथरूम को लागि सिरेमिक बंद करो
म कसरी भान्साको भान्सा आफैलाई सेट गर्न सक्छु?
फलको रूखको उद्गम
बिलीरी डिसकेनेसियाको लागि आहार
पार्किन्सनको रोग - कसरी पहिलो अभिव्यक्तिलाई ध्यान दिनुहोस् र अर्को के आशा गर्न सकिन्छ?
एक मोमबत्ती संग गरम मारिन्छन्
गर्दनमा एक तिल को मतलब छ?
कपालहरू डिब्बा माछाबाट
5 मानवजातिलाई विदेशी दिमागद्वारा सिर्जना गरिएको5चौंकात्मक प्रमाण
सारा जेसिका पार्करको जीवनी
कसरी दाँत दुखाइबाट छुटकारा पाउनु हुन्छ?
बीउबाट थुजु कसरी बढ्नुहुन्छ?